မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: April 2011
ငါနဲ.မတူရန်သူ.လူ အယူအဆများ ပြင်းထန်စွာရှုံ.ချ
အီးယူနဲ.ကုန်သွယ်မှု ပမာဏဟာအထူးပဲအရေးကြီးပါတယ် ယခုတင်ပြထားတဲ့ ကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုလေ့လာရင် အာဆီယံနိုင်ငံများ ဖြစ်တဲ့ ထိုင်း၊ဗီယမ်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင် အစရှိတဲ့နိုင်ငံ များဟာ မြန်မာထက် အဆများစွာများနေတာကို တွေ.ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အီးယူနိုင်ငံများက သာ စီးပွား ပိတ်ဆို.မှုမလုပ်ခဲ့ရင် ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာ ယခုထက် များဖို.ရှိပါတယ်။မနေ.ကပဲ ကျင်းပ ပြီးစီးတဲ့ အီးယူ အစည်းဝေးမှာ စီးပွားပိတ်ဆို.မှုကို ဆက်လက်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါကိုဦးဝင်းတင်က စီးပွားပိတ်ဆို.မှုများဖွင့်လှစ်ဖို. ကြိုးပမ်းတဲ့ အခြားအမြင်မတူတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများကို စစ်မှန်တဲ့အသံတွေ မဟုတ်ပဲ စစ်အုပ် စုနဲ. တစ်စုံတစ်ရာ သဘောတူညီမှုရခြင်း တစ်စုံတစ်ရာ အပေးအယူလုပ်လိုခြင်းက ပေါ်ထွက်လာတဲ့အသံတွေဆိုပြီး ဝေဖန်ပုတ်ခတ်သွားပါတယ်။အင်အယ်ဒီမှ ဦးဝင်းတင်ရဲ့အခြားသော နိုင်ငံရေးပါတီများအပေါ် ငါနှင့်မတူ ရန်သူ.လူဟူသောအဓိပါယ်သက်ရောက်တဲ့ စကားများ ဘီဘီစီနှင့်ပြောကြားချက်ကို ကျွန်ုပ်တို.ပါတီမှ ပြင်းထန်စွာရှုံချပါတယ်။
Trade with eu and burma -
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:53 AM0comments Links to this post
အီးယူမှခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ဆို.ထားသော မြန်မာ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်အပေါင်းအပါများစာရင်း
ခရီးသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့်သားသမီးများ၊ နောက်လိုက်နောက်ပါစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ စာရင်းဖြစ် ပါသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 1:15 AM0comments Links to this post
European Union မှမြန်မာပြည်သို. ထောက်ပံ့မှုများ လေ့လာနိုင်ပါသည်
ဥရောပယူနီယံမှ မြန်မာပြည်သို.ထောက်ပံ့သမျှ ကိုမူရင်း ထုပ်ပြန်ချက်အတိုင်း တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို.တိုင်းပြည် နှင့်ပြည်သူများ ဘယ်နေ.အထိဒုက္ခသယ်ဘ၀တစ်ဖက် တော်လှန်ရေးတစ်ဖက် ဖြင့် စခန်းသွားမည်လဲ ဆိုသည်ကို အဖြေရှာကြဖို.ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပထောက်ပံ့မှုများသာ မရှိခဲ့လျှင် ဒုက္ခသည် များ၏ ဘ၀ မည်သို.စခန်းသွားမည်လဲ၊ ဒုက္ခသည်များ၏ အထောက်အပံဖြင့်သွားနေသော တော်လှန်ရေး ၏ ရလာဒ်များ စသည်ဖြင့်တို. ကိုစဉ်းစားလေ့လာကြ ရန်ဖြစ်ပါသည် ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှဒုက္ခသည်များနေရပ်ရင်းပြန်ပို.မည့် သတင်း များနှင့်ဆက်စပ်လေ့လာစေလိုပါသည်။
The European Union continues its steady support for humanitarian projects in Burma/Myanmar and Thailand in 2011 (17/03/2011)
The European Union's humanitarian assistance for Burma/Myanmar and Thailand will reach €22.25 million this year. The size of the contribution was announced in Bangkok by Kristalina Georgieva, the European Commissioner for Humanitarian Aid, International Cooperation and Crisis Response. From the European humanitarian aid budget, €8 million will be allocated to refugees from Burma/Myanmar living in border camps in Thailand, and €14.25 million will provide help to vulnerable communities in Burma/Myanmar, including those affected by cyclone Giri.
"The European Union has long beenaleading supporter to the people in need of humanitarian aid in Thailand and Burma/Myanmar; in 2011, our assistance will remain generous as we continue to work for sustainable solutions for the refugees and disaster-stricken communities in the region," Commissioner Georgieva said. She gave details of the Commission's 2011 humanitarian support in Burma/Myanmar and Thailand after visiting the Mae Sot - Mae La refugee camp in Western Thailand and after meeting Prime Minister Abhisit Vejjajiva and Foreign Minister Kasit Piromya.
The €8 million funding for the refugees in six of the nine camps along the border will mainly provide food assistance, health care, clean water and sanitation. Over 100,000 refugees will benefit from European assistance.
The €14.25 million allocation for Burma/Myanmar includes €5m for the remaining humanitarian needs in the aftermath of cyclone Giri which hit Rakhine State in October 2010. Immediately after the disaster, the European Commission provided €3 million in aid, but four months on, the affected communities are still facing considerable challenges and need humanitarian support.
Today, over 140,000 refugees from Burma/Myanmar live in nine camps in Thailand. The European Commission is among the largest donors to the camps and since 1995 has provided, including this 2011 funding, €149 million - €103m of humanitarian funding and €46m through other Commission longer term assistance budgets (over the same period ECHO has also provided €132 million of humanitarian support within Burma/Myanmar).
If we include the European Union Member States donors (DFID, SIDA, NL, Denmark, etc), the European Union has been providing 25 mi€ per year since 2007, which is 50% of the overall humanitarian support provided to the refugees and displaced along the border.
The European humanitarian assistance covers food support, basic healthcare, water and sanitation. Essential food aid is provided to over 65,000 refugees, and 100,000 benefit from basic medical services. The projects that receive financing from the European Union are implemented primarily through international non-governmental organisations and UNHCR.
To ensure that refugees get not only immediate support, but alsoachance forabetter future and greater self-reliance, the European Commission plans to gradually refocus its aid to camp residents – from humanitarian relief toward more sustainable support.
The European Commission provided €110,000 to the Thai Red Cross to provide urgent humanitarian assistance to people affected by the floods which inundated the north-eastern and central provinces of Thailand in August and September 2010.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 10:16 AM2comments Links to this post
အာရှဖွံ.ဖြိုးရေးဘဏ် မှ ၂၀၁၁ အစီရင်ခံစာတွင်ပါရှိသော မြန်မာ့စီးပွားရေးအခြေပြ
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:30 AM 1 comments Links to this post
ကျင်းပနေတဲ့ပါလီမန်တွင်း အခြေအနေတွေကို ကြည့်ရင်အားတက်စရာများတွေ.ရသလို စိတ်ပျက်စရာ များလည်းတွေ.ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အားတက်စရာဆိုတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်ထက်ဝက်အတွင်း ပြောပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့စကား တွေကို ပြောနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေမယ့် စိတ်ပျက်စရာတွေကတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ အဆိုတင်သွင်းမှုများ နဲ.မေးခွန်းများ အရာမရောက်စေခဲ့တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လွှတ်တော်တွင်းမှာ မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းအများစုဟာလည်း ဒေသဆိုင်ရာအခြေအနေများနဲ.ပတ်သက်တဲ့မေး ခွန်းများ နဲ.အဆိုများဖြစ်နေတာကိုတွေ.ရမှာပါ။ တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ.သက်ဆိုင်တဲ့အဆိုတွေကတော့ ရှားရှားပါးပါးလို.ပဲ ပြောရမှာ ပါ။ ဒါကလည်း သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ. သူတို.ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကို ဒေသဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများ လုပ်ပေးပါ့ မယ်ဆိုတဲ့ဂတိက၀တ်နဲ. အနိုင်ရလာတာဖြစ်လို. သူတို.ရဲ့အဆိုတွေကိုလည်း အပြစ်မတင်သင့်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဥပဒေ တွေက လွှတ်တော်တွင်းမှာတင်သွင်းသင့်ပါသလဲ၊ တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်လိုဥပဒေတွေဟာ လိုအပ်နေပါသလဲ၊ ဥပ ဒေ တစ်ရပ်ဖြစ် လာမယ်ဆိုရင်ကော ဒီဥပဒေကိုအကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ပါ့မလား။ အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို.ခက်ခဲတဲ့ ဥပဒေတွေ၊ အဆိုတွေ ကို ပါလီမန်မှာ ဆုံးဖြတ် အနိုင်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်အတွက်သင့်တော်ပါ့မလား စသည်ဖြင့် စဉ်းစားစရာအလွန်ပဲများ လှပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စကို ဥပမာ အနေနဲ.ပြောရရင် ရခိုင်ပြည်နယ်က ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးရဲ့အဆိုဖြစ်တဲ့ရခိုင် ပြည်နယ်တောင်ကုတ် ဒေသက ထုံးကျောက်တောင်မှာ ဘိလပ်မြေစက်ရုံနဲ.ပတ်သက်တဲ့အဆိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသရဲ့ထုံး ကျောက်ဟာ အရည်အသွေးမမှီတဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်ဖို.မဖြစ်နိုင်ကြောင်းခြေပတဲ့အတွက် လက်လျှော့ခဲ့ရတဲ့နမူနာပါ။ လွတ် တော်မှာ အဆိုတင်တာ နိုင်ငံရေးသမားရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ ထုံးကျောက်ထဲမှာ သဲဓါတ်ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုံးပါလဲဆိုတဲ့ကိစ္စက တော့နိုင်ငံရေးသမားရဲ့အလုပ်မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ ပညာရှင်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ သိသာတဲ့ အချက်ကတော့ နိုင်ငံရေးသမား ဟာပညာရှင်မပါပဲ ဘာမှ လုပ်လို.မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။
အခုမှတည်ထောင်ခါစ နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာက လည်း တတ်ကြွမ်းတဲ့ပညာရှင်ကအဆင်သင့်မရှိသေးပါဘူး။ ပညာရှင်ရှိသည့်တိုင်အောင်ကလည်း သုတေသနစရိတ် နဲ.သုတေသနလုပ်ဖို. အချိန်လည်းမရှိသေးတဲ့ ကာလဖြစ်နေပါတယ်။ ပါလီမန်မှာ အဆိုတစ်ခုတင်တယ်ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များ၊ အချက်အလက်ကိန်းဂဏန်းများ၊ သုတေသနပြုမှုများ၊ တိုင်းပြည်မှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လျှို.၀ှက်အချက်အလက်များကို ကိုးကားပြီးတော့မှတင်သွင်းရတာပါ။ တင်သွင်းလိုက် တဲ့ အဆိုတွေဥပဒေတွေဟာလည်း ပါလီမန်ကျင်းပနေတဲ့ အစည်းဝေးခန်းထဲမှာ ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လို.ရတဲ့အလုပ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အခုပါလီမန်မှာ တက်ရောက်နေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များမှာ ပါလီမန်ထဲမှာဝင်ရောက်ချဲလင့်လုပ်နိုင်လောက် အောင် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်များပြည့်စုံသေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကာလတစ်ခုအထိ အမတ်တွေဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာရော ပြင်ပမှာပါ လေ့လာစရာတွေလုပ်ဖို.လိုနေပါသေး တယ်။ နိုင်ငံတကာပါလီမန်တွေမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ အစိုးရရဲ့လျှို.၀ှက်ချက် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို တရား ၀င်လေ့လာဖတ်ရှုခွင့် ရှိကြတဲ့သူတွေပါ။ အခုလွှတ်တော်မှာ လည်း ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ Classified Papers လို.ခေါ်တဲ့ အစိုး ရ လျှို.၀ှက် မှတ်တမ်း မှတ်ရာများကိုဖတ် ရှုလေ့လာခွင့်ရအောင်တောင်းဆိုရပါလိမ့်မယ်။ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ် တဲ့အချက်အလက်များကို လေ့လာခွင့်မရရင် အမတ်တွေဟာဘာမှ လုပ်နိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကန်သမတ ကလင် တန်ဟာ ငယ်စဉ်က ပါတီရဲ့ဆီနိတ်တာရဲ့ ရုံးခန်းကိုသွားရင်း Classified Papers တွေကို ဖတ်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို.ဆိုပါတယ်။ ကလင် တန်ဟာ ထက်မြက်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လို. သူ.အဖေအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ ဆီနိတ်တာကြီးက လျှို.၀ှက်စာရွက်စာတမ်းတွေ လေ့လာခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ.သမတဖြစ်လာနိုင်တာ တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာ သုတေသနဌာနနဲ. Think Tank တွေမရှိသေးပါဘူး ဒါတွေလုပ်နိုင်ဖို.လည်း အချိန်နဲ. ငွေအား လိုအပ် နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရေးဆိုင်ရာပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို.ဆိုရင် ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ လွတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်တွေအပါအ၀င် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံကပါမောက္ခတွေ နဲ. ပညာရှင်ပေါင်းစုံလိုအပ်ပါတယ်။ လိုအပ် ချက် ပေါင်းစုံ နဲ. စတင်နေရတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ လွတ်တော်တွင်း ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာ ပြင်ပ က ပညာရှင်များနဲ. မီဒီယာ များရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုမရပဲ ဝေဖန်ပုတ်ခတ်မှု ပြင်းထန်စွာခံနေရတာဟာလည်း တိုင်းပြည်အတွက်ခြောက်ခြားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ချက်ပေါင်းစုံနဲ. လွှတ်တော်တွင်းမှာ အရေးနိမ့်နေတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်သူတို.က အစကတည်းကပြောသားပဲ အခုတော့ခံရပြီမလား ဆိုပြီး လူသိရှင်ငြားဝမ်းသာပြနေကြတာက လည်း တိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှကောင်းကျိုးဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဟာ ပြည်သူရဲ. ဆန္ဒနဲ. လွှတ်တော်ထဲဝင်ရောက်နေကြတာဖြစ်လို. မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကို သဘောထားမတူသူတို.ကလေးစားသင့်ပါတယ်။ ပြည်သူ.ဆန္ဒဟာ ထာဝရမှန်ပါတယ်။
လွှတ်တော်ဟာ ပြည်သူ.ဆန္ဒများရဲ့အစုအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးလို. အတိုက်အ ခံလုပ်သူများကသဘောတူထားကြပေမဲ့။ စားဝတ်နေ ရေးအခြေအနေ အရ ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြောက်စိတ်နဲ.ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြံ.ခိုင်ရေးပါ တီကိုမဲပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူ ရဲ.ဆန္ဒကို သတိပြုမိဖို.လိုပါတယ်။ တစ်ပိုင်းမှာ လည်းမဲမသမာမှုတွေကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲရှုံးခဲ့ပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူပြည်သူဟာ ရဲ့ဝံ့စွာမဲပေးခဲ့တဲ့အတွက် လွတ်တော် တစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကိုလက်ခံတဲ့ ပြည်သူများ သန်းနဲ.ချီရှိတယ်ဆိုတာ လဲဘယ်လိုမှငြင်းလို.မရစေပါဘူး ဒါဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ငံရေးကို ပြည်သူက သဘောတူလက်ခံလိုက်တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ.စစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့နည်းပညာပေါင်းများစွာရှိပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ နည်းထက်ပိုကောင်းတဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတော့မရှိနိုင်ပါဘူး။
တိုင်းပြည်မှာ ကြောက်စိတ်နဲ. စားဝတ်နေရေးကိုသာ ဦးစားပေးတဲ့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒတွေ များပြားနေတာ ကို ထောက်ရှုရင် ပြည်သူ. အားနဲ.စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ပြန်လည်သုံးသပ်ရမယ် နိုင်ငံရေး အ တွေးအခေါ်တစ်ရပ်ဖြစ် နိုင်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်သူတွေဟာ သူတို.ရဲ့ဆန္ဒတွေနဲ. ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ လွှတ် တော်ထဲသွားဖို.ကျတော့ သူတို.သဘောနဲ.သွားလို.မရတော့ပါဘူး။ ပြည်သူ.ရဲ.ဆန္ဒနဲ.သွားခဲ့ရတာပါ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့် မယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်ခဲ့သူတွေဟာလည်း သူတို.ရဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ. သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတာပါ။ ပြည်သူထဲကို စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူတွေရဲ့ဆန္ဒဟာ အမှန်လဲဆိုတာနဲ.ပတ်သက်လာရင် တော့ ပြည်သူဆန္ဒသာ အမှန်လို.ပြောရမှာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်တဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ဟာအရေးကြီးပါတယ်။ သူ.ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်နဲ.က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ လွှတ်တော်တွင်း ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ဂယက်ရိုက်စေတဲ့အ တွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကာလ ဆိုတာကလည်း မကြာခင်ရင်ဆိုင်ရတော့မဲ့ စိမ်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရွေး ကောက်ပွဲဝင်ခြင်းမ၀င်ခြင်းဟာ သက်ဆိုင်ရာပါတီတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာ မိမိပါတီကိုပဲ မဲထည့်ဖို. အခြားပါတီကိုမဲမထည့်ဖို. ပြည်သူကိုစည်းရုံးနိုင်ပေမဲ့ ဘယ်သူကိုမှမဲမထဲ့ပဲ သပိတ်မှောက်ဖို. ဆော်သြတာတော့ ပြည် သူရဲ့ဆန္ဒကို အလေးမထားရာရောက်ပါတယ်။ ပြည်သူဟာ သူ.ရဲ့မဲဆန္ဒကို မှသူ.စိတ်တိုင်းကျ အသုံးချခွင့်မရပဲ နိုင်ငံရေး သမားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေကို လိုက်နာရမယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီလို.မခေါ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ပြည်သူတစ်ယောက်မှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ကိုဆန္ဒမဲတစ်ပြားပဲပေးခွင့်ရကြတာပါ။
နောက်တစ်ကြိမ်ကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာ ၂၀၁၅ မှ ကျင်းပမှာဖြစ်လို. အခုအချိန်မှာ ဆွေးနွေးကြဖို. စောသေးပေမဲ့ ၂၀၁၂-၁၃ ကာလဟာ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အလွန်ပဲနီးကပ်နေပြီလို.ပြောနိုင်ပါ တယ်။ ၁၀ တန်းဖြေမယ့်ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် ကျောင်းစတက်တဲ့နေ.မှာပဲ အတန်းတင်စာမေးပွဲအတွက် ပြင် ဆင်ရ မယ်ဖြစ်သလိုပါပဲ။
``ကွန်ဂရက်၏ အရှိန်အ၀ါသည်ကြီးမားလွန်းရကား မိမိသဘောဆန္ဒဖြင့် အနားယူသွားသူ ဆီနိတ်တာဆို၍ အနည်းငယ်သာလျှင်ရှိသည်`` ဟု အမေရိကန်သမတ ဂျွန်အက်ဖ် ကနေဒီကပြောဘူးပါတယ်။ အခုလွှတ်တော်ထဲမှာပါဝင် နေသူတွေဟာလည်း သူတို.ဆန္ဒနဲ.လွှတ်တော်ကိုစွန်.ခွာဖို.မလုပ်ကြတော့ဘူးဆိုရင် လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲ တွေဟာ အတိုက် အခိုက်အလွန်ပဲပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်အဟောင်းတွေနဲ. မျိုးဆက်သစ် အမတ်လောင်းတွေရဲ့အားပြိုင်ပွဲဟာ အတော်ပဲပြင်းထန်တော့မှာပါ။ ဒီအားပြိုင်ပွဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက် အယူအဆတွေက ရေပန်းစားနေဦး မယ်မဟုတ် တော့ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လာမဲ့နိုင်ငံရေးခေတ်ဟာ အသိဥာဏ်နယ်ပယ်ရဲ့ခေတ်ဖြစ်လို. ပညာရှင်တွေမပါပဲ နိုင်ငံရေး သမားတွေ ထင်တိုင်းမကြဲနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ ဒီမိုကရေစီနဲ.လူ.အခွင့်အရေးအကြောင်းဟောပြောတတ်ရုံလောက် နဲ. နိုင်ငံရေးလုပ်လို.မရတော့တဲ့ကာလကိုရောက်နေပြီဆိုတာ နိုင်ငံရေးလုပ်သူများလက်ခံနိုင်ကြဖို.ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:13 AM3comments Links to this post
အီးယူမှခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်ဆို.ထားသော မြန်မာ ဗိုလ်...
European Union မှမြန်မာပြည်သို. ထောက်ပံ့မှုများ လေ့...
အာရှဖွံ.ဖြိုးရေးဘဏ် မှ ၂၀၁၁ အစီရင်ခံစာတွင်ပါရှိသော...